Inona no atao hoe Chief Activity Officer? 52 Wyndham Resorts any Azia-Pasifika izao no miantehitra amin'i Emma Todd
Home » Lahatsoratra farany farany » People » Inona no atao hoe Chief Activity Officer? 52 Wyndham Resorts any Azia-Pasifika izao no miantehitra amin'i Emma Todd
Vaovao Mafana • Vaovao • People • Resorts • Vaovao Mafana Singaporeana • Tourism
Emma Todd dia voatendry ho lehiben'ny andraikitry ny hetsika, Wyndham Destinations Asia Pacific.
Wyndham Destinations Asia Pacific dia faly manambara ny fanendrena an'i Emma Todd ho Lehiben'ny Asa Fanaraha-maso voalohany ho an'ny Faritra Azia Pasifika.
Ny hetsika dia natao hanohanana ny hetsika vao haingana nataon'ny orinasa hanatsarana ny fijanonan'ny vahiny sy ny mpikambana ao amin'ny klioba miaraka amin'ny fampidirana andiana hetsika ao amin'ny Club Wyndham South Pacific, Wyndham, Wyndham Grand ary Ramada by Wyndham Resorts.
Ny hetsika ho an'ny Wyndham Destination Asia Pacific hanambara ny Chief Activity Officer dia natao hanohanana ny hetsika vao haingana nataon'ny orinasa hanatsarana ny fijanonan'ny vahiny sy ny mpikambana ao amin'ny klioba miaraka amin'ny fampidirana hetsika maromaro ao amin'ny Club Wyndham South Pacific, Wyndham, Wyndham Grand, ary Ramada by Wyndham Resorts.
Avy amin'ny e-scooter sy e-bikes ka hatramin'ny paddleboards sy boogie boards, fitrandrahana volamena sy vatosoa, sarety pedal, sy ny maro hafa, traikefa mihoatra ny 100 no nampiana manerana ny fanangonana ny toeram-pialan-tsasatra nataon'ny orinasa tamin'ny taon-dasa. Maimaim-poana ny hetsika ho an'ny mpikambana ao amin'ny Club Wyndham South Pacific ary azo zahana amin'ny sarany kely ataon'ireo vahiny amin'ny toeram-pitsangatsanganana.
Ramatoa Todd dia manana traikefa be dia be amin'ny indostrian'ny fandraisana vahiny. Tale Jeneralin'ny Club Wyndham Seven Mile Beach any Hobart, Tasmania izy amin'izao fotoana izao. Nanova ny trano ho iray amin'ireo toeram-pisakafoanana Club Wyndham malaza indrindra any Aostralia izy. Izy no nitarika ny fananganana toeram-pambolena fialam-boly sy zaridaina anana, miaraka amin'ny dite billy sy ny traikefa mampangotraka atao indray mandeha isan-kerinandro amin'ny afo misokatra. Misy ihany koa ny fitsangantsanganana ara-tontolo iainana amin'ny flora sy ny biby ary ny fihazana harena e-bisikileta.
“Faly aho mandray ity andraikitra vaovao sy mampientam-po ity. Nahafinaritra ny nahita ny valin-kafatra tsara avy amin’ireo mpikambana ao amin’ny klioba sy vahiny, hatramin’ny nanombohanay ny hetsika”, hoy Rtoa Todd.
“Azo antoka fa nahatonga ny toeram-pialan-tsasatray ho tsy hay hadinoina ireo traikefa ireo. Ny e-bikes, ho ohatra iray monja, dia manome fahafahana ny mpitsidika hijery tsara kokoa ny faritra, ary nisafidy hetsika fanampiny miavaka amin'ny toerana tsirairay izahay. Ao amin'ny Club Wyndham Denarau Island any Fidji, ohatra, dia misy baolina voanio sy aqua tramp. Ao Ballarat, Victoria, dia misy sluice volamena sy vatosoa miaraka amin'ireo traikefa hafa. Noho izany dia afaka miandrandra zavatra hafa foana ny vahiny, ”hoy izy.
Amin'ny andraikiny vaovao, Ramatoa Todd dia hiara-hiasa amin'ireo mpitantana toeram-pialam-boly manerana ny toeram-pialan-tsasatra 52 any amin'ny faritr'i Azia Pasifika mba hamoronana, hanatsara ary handrindra ny hetsika.
Warren Cullum, filoha lefitry ny Hotely sy Resort Operations, Wyndham Destinations Asia Pacific dia nilaza hoe: "I Emma no tena mety amin'ny anjara asany miaraka amin'ny firaketany mahavariana amin'ny famoronana hetsika tsy manam-paharoa ho an'ireo mpikambana ao amin'ny klioba sy vahiny. Nandritra ny fotoana niarahany taminay dia nalaza ho tia mamorona sy manavao izy. Manantena izahay ny hahita hetsika mampientam-po kokoa nampidirina hanatsarana bebe kokoa ny traikefan'ny vahiny sy ny mpikambana ao amin'ny klioba. "
Ramatoa Todd dia ho toy ny rohy manan-danja eo amin'ny ekipa mpitarika ambony, ny biraon'ny orinasa ary ny mpitantana toeram-pitsangatsanganana mba hanara-maso sy hanampy amin'ny fanatsarana ny fandaharan'asan'ny toeram-pitsangatsanganana tsirairay. Hanohy hanatanteraka ny andraikiny amin'ny maha-Tale Jeneralin'ny Club Wyndham Seven Mile Beach i Emma mandritra ity andraikitra vaovao mampientam-po ity.